डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु पूरा गर्न सकिदैन – प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु पूरा गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्था हो, त्यसलाई ‘डिक्टेक्ट’ गर्न मिल्दैन,’ बिहीबार चितवनको
काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि सिंगापुर गएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । यही असार ३ गते पत्नी सीताको उपचारका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका अध्यक्ष